Individual and business donations, social workers, Somali community member and diaspora
Waxa aad qaban karto
Ma tahay xubin ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan meel ay CISP ka shaqeyso? Ka-qaybqaado Shirarka Waxqabadka
CISP waxaa ay ogsoon tahay in xubnaha ka tirsan bulshada Soomaaliyeed laga yaabo in aaney heli karin internet, sidaa daraaddeedna waxaa ay go’aansatey in:
a- Ay shirar waxqabadka ku saabsan oo joogto ah ay ku qabato goobaha aan ka shaqeyno;
b- ay Wararka Hawsha, oo laga soo daabacay shabakadda internet-ka, ku soo bandhigto looxa macluumaadka ee xafiiska CISP, kaas oo uu fiirsan karo qof kasta oo daneynaya.
Shirar waxqabadka ku saabsan oo Joogto ayaa qayb ka ah Dadaalka Xisaabtanka ee CISP ee ay la xisaabtamayaan ka-faa’iideystayaasheeda. Shirarka Internet-ka waxaa lagu qabanqaabiyaa xafiisyada gudaha ee CISP si Wararka Hawsha ee shabakadda CISP ay ugu soo bandhigaan degaanka gaarka ah ee ay ka shaqeyso ee lagu qabanayo shirka. Shirarku waxaa ay u furan yihiin qof kasta oo doonaya in uu ka qaybgalo waana fursad xubin kasta oo bulshada ka mid ah uu ku hadli karo uuna jawaab-celintiisa ku bixin karo. Nala soo xiriir si aad u ogaato waqtiga la qabanayo shirka nagu soo fool leh.
Ma tahay xubin ka tirsan qurba-joogga Soomaaliya? Nala hawlgal
CISP si gaar ah ayaa ay u qiimeyneysaa Jawaab-celintaada iyo taageeradaada.
Haddii aad jeceshahay in aad ogaato waxa waqtigan laga qabanayo degaan ama waax gaar ah, fadlan booqo qaybta Wararka Hawsha.
Haddii aad dooneyso in wax gaar ah aad ka qabato degaan ama waax gaar ah, fadlan Nala soo xiriir: waxaa aan kugu caawin karnaa in aad qaabeyso aadna fuliso waxqabad macno ku fadhiya.
Haddii aad xubin ka tahay urur qurba-joog oo aad leedahayna shabakad internet, fadlan Nagu soo xir, si aad noogu oggolaato in Soomaalida kale ee dibadda ku nool ay wax uga ogaadaan waxqabadyadeenna iyo dadaalladeenna.
Ma tahay shakhsi ama ganacsi? Na caawi
Caawimada aan ka helno shakhsiyaadka ama sharkadaha waa mid aad qiimo noola leh, sababta oo ah waxaa ay inoo suuragelisaa in aan gaarno ujeeddooyinkeenna.
Na taageera oo nagu caawiya sidii aan maaliyad u siin lahayn waxbarashada, caafimaadka, biyaha, ilaalinta iyo maciishadda dadka Soomaaliyeed. Deeq ayaa aad internet-ka ugu diri kartaa CISP, adiga oo isticmaalaya kaararkaaga VISA ama Mastercard iyo Maestro. Guji badhanka KU DEEQ HADDA si lagugu duwo shabakadda internet-ka ee xarunteenna dhexe, halkaas oo aad ku buuxin karto foomka deeqda.
Fadlan xusuusnow in aad saxdo “Somalia” halka ay ku qoran tahay "Project / Campaign to Support". Marka aad buuxiso foomka, guji “send” si laguu geeyo shabakad internet oo ammaan ah (oo ay martigeliso Cariparma/Credit Agricole) halkaas oo geeddi-socodka deeq-bixinta lagu dhammeystiri karo.
KU DEEQ HADDA
Baro sida aad ku caawin karto CISP iyo Faa’iidooyinka Maaliyadeed ee aad ka heli karto. Ka eeg Xeer-Anshaxeedkeenna macluumaadka ku saabsan deeqaha iyo xiriirrada lala yeelanayo ganacsiyada. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah, fadlan Nala soo Xiriir.
Ma tahay shaqaale horumarin? Nala shaqee
Mar kasta waxa aan baadi-goob ugu jirnaa dad hibo leh oo nagu soo biira si ay gacan uga geystaan sidii aan isbeddel ugu sameyn lahayn nolosha dadka Soomaaliyeed.
Gaar ahaan, haddii aad tahay qof Qurba-joog ah, oo si wanaagsan ugu hadli kara Af-Ingiriisi iyo Soomaali, oo aad oggoshahay in aad ka hawlgasho degaanka aad ka soo jeeddo, fadlan Nala soo xiriir.
Macluumaadka ku saabsan dadaal uu qof bixiyo oo ay codsato CISP ka eeg Xeer-Anshaxeedka.
Eeg Nafaas Shaqo oo CISP- Soomaaliya